Mutungamiri Kubva Semalt: Ko Bhizimusi Renyu Rinogona Sei Kudii?
6ES7654-0YK00-0AB0 SIEMENS.5;text-align:justify;"> Kumakambani akawanda, kufambira mberi kwekambaniki kwemazuva matsva emadhigirii anzvisingagoneki. Makambani akawanda ari kuenda paIndaneti nekuda kwekukwanisa kuwanikwa kwe Search Engine Optimization (SEO). Somugumisiro, ndizvozvakakosha kuitira bhizinesi kugamuchira internet semutambo mutsva wokutsvaga, izvo zvinogona kuita kuti mabhizinesi aite zvakanaka.
Kuita bhizimusi rako rejjoni ribudirire paIndaneti, funga izvi, zvakajekayakatsanangurwa naOlver King, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt .
Basa rekushanda rinotsiva kuedza kwevanhu nokukurumidza. Mune dzimwe nguva, kune kuwedzerakushandiswa kwemashandi akachenjera. MuIndaneti yezvinhu (IoT), vatsvakurudzi vari kufanotaura kuti muna 2020, zvinopfuura mabhiriyoni 20.8 "mashandisi akachenjera"ichave ichishandisa kambani yekutengesa. Maererano nekambani yekugadzirwa kwemazuva ano, maitiro ese akachenjera ane zvigaro zvakadai se:
Kuzvienzanisa sekuzviita motokari motokari
Kuona (zvakadai seIoT senzwi seNFC)
3d kudhindwa kwekusika zvinyorwa zvakawanda 3d
Kugovera APIs inobvumira zvitsva zvitsva zvekugadzirisa zviri mumhepo
Kubatana kwevashandi sekuzivikanwa kwekutaura, zvinyorwa zveminwe uyekutsvaga kutsvaga pachedu
The Artificial Intelligence (AI) iri kutora kushanda kwemashini akachenjera.Kuburikidza nekubatana kwemichina yakasiyana-siyana, magadzirirwo emakombiyuta anogona kukonzera, kuwirirana, kudzidza neku kunzwisisa nyika yevanhu..Panguva ino, makirani akangwara ane njere dzekuvaka anosimbisa basa revanhu. Vanobatsira pane zvimwe zvakadaizviporofita pamwe nekuziva kuchinja kunokosha. Munyika yebhizimisi, makombiyuta anogona kuongorora maitiro uye kupa mhindurouye nehupamhi hwepamusoro hwekubudirira.
3. Zvinokanganisa Kuchinja
Unyanzvi hwekombiyuta hunonyanya kusimba kana zvichiuya kuI. Kufambira mberi uku kunorevakuti iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kubvuma nzira itsva dzekubatsira kwebhizimisi rako. Iyo nzira itsva inogona kusanganisira kukanganisa kukuru kwakadarosekubhadhara vashandi vakawanda nekuwana kushandiswa kwevamwe vashandi vasingashandi. Kuvhiringidzika kunogona kusanganisira kutora vashandi vako kuti vadzidzise paIndanetimatanho akadai sokugadzira unyanzvi. Iko rudzi rwekuvhiringidzika harusi kutorwa zvakaderera nevashandi vakawanda. Sezvo vamwe vachiramba, ndiro basa renyuvanoita kuti vave nechokwadi pamusoro pekukosha kwekutarisana uye kubatsira kwenguva refu mukambani.
Izvi zvinosanganisira zvinhu zviri pamusoro apa uye nguva ye data uye analytics. Itsvamabhizimisi ari kutangira nekuda kwemazhinji maitiro internet uye makombiyuta anounza. Somuenzaniso, munyika yenhumbi,mawebhusayithi evanhu vanoita zvavanowana kuburikidza nekuchenesa zvinyorwa kune vaverengi varo. Tsvaga injini yakafanana neGoogle ine simba rekufanotaura nezvekutsvaga chinhu chauri kutsvaga. Kune dzimwe nguva, kutaridzirwa kunotarirwa kwakatora pa internet kuunza mufananidzo wakanakayekutengeswa kwemusika.
Makambani anokwanisa kuenda paIndaneti kutora kushandiswa kwakakwana kwevatengi vatsva. Nokushandisa SEO, vashandisikuumba huno hwakasimba hwekushandiswa pamwe nekuchengetedza nzvimbo ine utano muSERPs yepaini yakagadzirirwa ye keywords. Iyi mamiriro mwoyoyekutengesa kuInternet. Bhizinesi rimwe nerimwe riri kuedza kuita izvi. Izvi zviri pamusoro apa zvinogona kuita kuti bhizinesi rako rive nekubatanidzwa kwedhipatimendi ye digital pane zvimwe zvezvinhu zvinokosha zvakasimba zvakasimba.